Puntland oo mar kale soo bandhigtay Maxaabiis katirsan Al-Shabaab oo dagaal lagu qabtay( Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Puntland oo mar kale soo bandhigtay Maxaabiis katirsan Al-Shabaab oo dagaal lagu qabtay( Daawo Sawirada)
Maamulka Puntland ayaa mar kale waxa ay soo bandhigeen maxaabiis ay ka qabteen dagaalyahanada Al-Shabaab , kadib howlgal ay ciidamada maamulkaasi ka sameeyeen duleedka Degmada xeebta leh ee Bander Bayla.
Magaalada Qardho ayaa shalay oo Jimco aheed waxaa lageeyay 18- dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ,kuwaa oo kamid ahaa dagalayahandii dhawaan ka dagaalamay Toga Suuj, hasa ahaatee halkaasi ka baxsaday .
Saraakiisha ciidamada Puntland ayaa sheegay in maxaabiistan Shabaab katirsan qabashadooda ay iska kaashadeen dadka reer Miyigiga iyo Ciidamada amaanka Puntland , waxaama dagalayahanadan laga soo qabtay duleedka Degmada Bander Bayla iyaga oo habowdsan sida ay Saraakiishu sheegeen.
Dagaalyahanadan la geeyay magaalada Qardho aya ala sheegay in ay qaarkood ciidamada Puntland ay dagaal kala hortageen markii la qabanayay halka kuwa kalana ay si caadi ah isku soo dhiibeen, waxaana hada lagu hayaa maxaabiistan xabsi kuyaala magaalada Qardho.
Puntland ayaa hore magaalada Garawe iyo Deegaanka Garacad ugu soo bandhigay tiro maxaabiis ah oo katirsanaa dagaalyahandii Al-Shabaab ee doonyaha uga soo dagay xeebaha Garacad iyo Garmaal, waxaana dagaalyahanadan ay Puntlnad qabteen u badan caruur aad u yar yar.
Banaanbaxa ka dhacay Baledweyne iyo ciidamada oo dhaawacay saddex ruux oo Banaanbaxayaasha ka mid ahaa(Daawo Sawirada)
Maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida oo mar kale dil ku xukuntay Xasan Xanafi